ဆပ်ပြာမှော်ဆေးပေးသွင်းသူနှင့်လက္ကား - China factory - Sellers Union
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ရေချိုးခန်း > ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ > ဆပ်ပြာမှော်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေချိုးခန်းမှန်မှန်ဆပ်ပြာ၊ lotion သို့မဟုတ် Sanitizer w / Light up နှင့် Chime များအတွက်တန်ပြန်ဆန့်သောအရည်ဆပ်ပြာပေးသည့်ရေစိုခံအခြေခံအားဖြင့်အလိုအလျောက်ဆပ်ပြာပေးစက်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ပြီးတော့နိုင်ငံများစွာမှာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဖို့ ၂၃ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိတယ်။
SoapMagic Dispenser ၏ ၁။ ထုတ်ကုန်နိဒါန်း
This ဆပ်ပြာမှော် was very hot selling items in many countries. The upgraded sensor prolongs the working life of it and is sensitive so you can get touchless free soap quickly and enjoy your happy life.
2.Product Parameter (Specification) of the ဆပ်ပြာမှော်
ဆပ်ပြာမှော် Automatic Soap Dispenser Touch less counter-top liquid soap dispenser waterproof base for Bathrooms regular soap, lotion or Sanitizer w/Light up and Chime
SoapMagic Dispenser ၏ထုတ်ကုန်၏အသွင်အပြင်နှင့်အသုံးပြုမှု
★ Touchless ဆပ်ပြာမှော် - non-contact motion sensing technology, this hands-free soap dispenser is designed with built-in infrared sensor, just put your hand The soap is automatically dispensed under the sensor.
ချစ်ခြင်းလျှော်ခြင်းလက်များ - ဤမြှုပ်ထားသောဆပ်ပြာပေးစက်သည်လက်ဖြင့်လျှော်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကလေးများကိုလက်များဆေးခြင်းအလေ့အကျင့်ဖြစ်စေရန်ကူညီပေးသည်။
Quick လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်း - ဆပ်ပြာတိုင်ကိုအောက်ခြေ torefill မှဖယ်ရှားပါ။
4. SoapMagic Dispenser ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
5.Product Qualification of the ဆပ်ပြာမှော်
6.Deliver,Shipping And Servingof the ဆပ်ပြာမှော်
hot Tags:: ဆပ်ပြာမှော်ဆေးပေးစက်၊ တရုတ်၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းသူ၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ စျေးနိမ့်၊ စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများ၊